Ngaphambili ekuphambukeni ngenxa yokushaqeka mfutho ingenye yezingxenye ezibaluleke kakhulu amabhayisikili yesimanje. umsebenzi wayo lomkhulu wenza Damping ukushaqeka imithwalo phambi oluvala amasondo uma nabo ukushayisana endleleni.
Isenzo we mfutho ukushaqeka yakhelwe zlib okusheshayo plug lapho agijimela isithiyo kanye decompression kuqhathaniswa kokuphumula. Umgomo esebenza ngayo ukumiswa ekuphambukeni ivumela umgibeli ukuhlala the sehhashi, ikakhulukazi okusezingeni eliphezulu ukushayela ngesivinini ku ezindaweni ezimbi.
Ngokwemvelo, ngokuhamba kwesikhathi, ngisho eqolo, okuthembekile ibhayisikili phambi ekuphambukeni iza laphinde labhidlika. Kulokhu, njalo ukusebenzisa amakhosi, uma kunesidingo, ukugcinwa kwalo futhi ukulungisa angakwazi ukukhokhela alulona olwawo wonke umuntu. Ngakho-ke iyasiza ukuqonda Imigudu idivayisi, ikakhulukazi disassembly, inhlangano, inkonzo, esikhundleni yayo izingxenye.
Kususelwa umklamo othize nedivayisi Damping, lezi zinhlobo ezilandelayo ebhayisikilini izimfoloko :
ekuphambukeni Ngesandla Esiqinile ngebhayisekili kwenza kube nokwenzeka ukuba ukuthutha ngesivinini kuyilapho egibele flat, asphalt enamathela ngenxa ukungabi ukushaqeka wezinciphisi oscillations.
Uma sikhuluma entwasahlobo-Elastomeric nomoya izinhlobo plugs, basuke ngokuyinhloko yakhelwe nokunciphisa ukuchayeka semfene ezinkulu, ezifana lula ukuhambisa phezu curbs noma ramps. Ngesikhathi esifanayo, i-plug enjalo mubi kakhulu ukuba sibhekane ngokuphumelelayo nezimo ezethusayo uma ushayela ku-amatshe amancane.
Ngokuphathelene emoyeni-uwoyela lamafutha-entwasahlobo izimfoloko ke lezi zinhlelo ukubamba ngempumelelo nokunciphisa sanoma yisiphi uthuthumele kungenzeka, ngisho nalapho ihlaselwe imifantu ingane ebusweni asphalt.
Ibhayisikili ekuphambukeni apharathasi
Izingxenye eziyisisekelo ukwehla kwentengo izimfoloko:
Rod --eksisi luxhumanisa exhunywe kwi umqhele. Kuhaya isixhumanisi yokuxhuma Uhlaka ibhayisikili.
Umqhele liyisici ushintsho okuyinto induku esinqunyiwe namanqina ekuphambukeni.
Umlenze - isakhi ukuthi removably exhunywe kwi-ibhulukwe-uhlobo ipulaki. Engxenyeni engaphakathi imilenze, okuyindawo ehlanganisa ngemfoloko ngebhayisekili, iziphethu egcwele, Damping nabalawuli kanye interlocks.
Ibhulukwe aqukethe izibuko ezimbili, ubakaki eqinile nakho ngeke kusize axhunyiwe. Izipikha yizindawo ukumiswa ekuphambukeni imilenze.
A ibhayisikili ukumiswa ekuphambukeni ehlukile Sakhiwo sangekhatsi, uma kulinganiswa nokwenu ejwayelekile, onobuhle elukhuni, amelela isakhiwo elula. The main izingxenye sangaphakathi ukwehla izimfoloko yilezi:
Seals - izingxenye ukuthi luvimbele ingress umswakama Imigudu nokungcola, kanjalo nokugcina ezingeni ozinzile mshini Lubrication.
Amaslayidi, okuyinto ethulwa ngesimo mncane-ngodonga bushings plastic, ibekwe ngaphakathi ibhulukwe ekuphambukeni.
nabalawuli ukuqina kukhona imishudo okuyizinto ukuqhutshekiselwa of nut zangaphandle plug umqhele. Onomfutho entwasahlobo ekuphambukeni imilenze ngesikhathi imithwalo design.
I iziphethu ezifakiwe emilenzeni ipulaki ukuncela amandla nomthelela by ukusonteka we metal. Ngaphambili ibhayisikili ekuphambukeni emoyeni futhi umoya-uwoyela uhlobo ayiqukethe iziphethu. Lapha, lo msebenzi wenziwa umoya onomfutho.
Ukulungiswa izimfoloko ibhayisikili
Ukulanda ilungelo ngaphansi isitayela ogibele nezici ibhayisikili Uhlaka isakhiwo ukumiswa ekuphambukeni, umnikazi we ihhashi ezimbili ezinamasondo uyakwazi silungise. Ukuze ulungise kahle ekuphambukeni ibhayisikili, kubalulekile ukuqonda yemfanelo izilungiselelo ngabanye kanye kulokho isiqondiso kufanele ilungiswe. Ngesikhathi esifanayo kuyafaneleka ukuthi ukulungiswa yangempela angakhuluma kuphela khona emoyeni plugs, uwoyela kanye nomoya-entwasahlobo hlobo.
ekuphambukeni ngamunye ngesithuthuthu ekuqaleni has izinga elithile rigidity. Lesi sici sibizwa ngokuthi ngendlela engafanele. Kahle kahle, Inkomba rigidity kumele singeqi amaphesenti ayishumi wezindleko unhlangothi obuphelele amakhono.
Lungisa mfutho ukushaqeka ibhayisikili Kunconywa, esekelwe isisindo lo muntu owayegibele ibhayisikili. Ngokuvamile, uma ipharamitha is kushintshwe ngemva kwe-ibhayisikili, futhi kushintshwe kuphela uma izinguquko ukushayela isitayela, isibonelo endabeni ushintsho kusukela ogibele ngesivinini phezu emathafeni phezu ekwehleni.
Ukulungisa Rebound ukumiswa ekuphambukeni kubalulekile lapho beshintsha ikhava uhlamvu. Ukuze ijubane ukusebenza esiphezulu ngesikhathi ugibele ibhayisikili kudinga okungenani Rebound ekuphambukeni nabo semfene. Kuphela ngale indlela yokunqoba lezo zithiyo sebenamashumi ukushova amandla. Ukuze ugibele anolaka sezwe ebuyile kulinganisela kushintshwe ngekubeka ephakeme izinga layo.
Kunezindlela inombolo ezanele izinhlelo ezintsha lapho mfutho ukushaqeka ibhayisikili ngokuzimela ulungisa ezingeni gxuma lapho kushintsha isimo umgwengwezi. Umgomo we operation we nezimfoloko ezinjalo kusekelwe ukuzwela landa kunyakaza yezingxenye yangaphakathi.
Ukufaka izinga elithile kokucindezelwa we izimfoloko ibhayisikili kwenza kube nokwenzeka ukuba kuncishiswe noma ukwandisa ijubane kokucindezelwa indlela. Le sethingi uba okuphambene kulowo odlule. Ngeshwa, ulungise kahle kokucindezelwa practice kungenzeka Ochwepheshe ezimbalwa kuphela.
inani elisele ku
Ilungiselela kuhilela ekuvimbeni ekuphambukeni ukumiswa esimweni static. Kuyasiza kubagijimi abasebenzisa bike mountain imodeli ngokushayela ku enamathela bushelelezi ibanga elide.
Indlela ukuqaqa ekuphambukeni ibhayisikili? Yenza disassembly cushioning indlela Kunconywa ukulandelana elandelayo:
usebenzisa hexagon unscrewed aphansi kokungathembeki imishudo;
umshudo unscrewed, okuyinto unomthwalo ukulungisa izakhiwo Damping entwasahlobo;
ukubuyiswa elastomer okuhloswe ukuze kukhawulwe travel isiphethu;
ukususa ngokucophelela ibhulukwe ekuphambukeni; ngakho-ke kuyadingeka ukuba iqaphe uwoyela okuholela nokungcoliswa kwamanzi;
nezindlala ekhishwe kanye bashing.
Uma uqonde ukuthi ukuqaqa ekuphambukeni ibhayisikili practice, kungenzeka ukwenza inhlangano, kokuba kwenziwe izenzo ezifanayo, kodwa kuphela in reverse. Into esemqoka - ukuba anake bese ulandela imiyalelo ncamashi.
ukunakekelwa esifike ngesikhathi, nokugcinwa nokulungiswa ekuphambukeni ibhayisikili kuyisihluthulelo "impilo" zalo. Gcoba ekuphambukeni Kunconywa akukho ngaphezu kwesikhathi esisodwa isizini ngayinye. Nokho, uma ushayela noma ukusetshenziswa njalo esindayo ukuchumisa le nqubo kuzodingeka iphendukele kaningi. Ngokuvamile, le nqubo Lubrication nje ukugcwalisa amafutha ngaphansi idasta nge isipetu. imilenze Landelayo ekuphambukeni athuthukile ngokucindezela indlela futhi begcoba izinsalela ziyasuswa nge isiponji emanzi.
Kubaluleke kakhulu ukuba ekuphambukeni kwi ibhayisikili uhlala okumsulwa. Ngakho-ke, ngemva ski ngamunye ukhuthazwa kakhulu ukusula inyawo zakhe anthers. Lokhu kuzovimbela odla mshini sangaphakathi ukungcoliswa uwoyela uthuli, okungaholela okungalungile ukuziphatha okusebenzayo.
Njengoba for ukumiswa ekuphambukeni yakho ke, abangenaso isipiliyoni esanele kangcono waphinda engozini uphathisa lo msebenzi emahlombe ochwepheshe. Ukuze ukufunda amakhono abawadingayo, kufanele usebenzise okuhlangenwe nakho Abahamba ebona, enza izikhathi eziningana disassembly nasemhlanganweni ngaphansi kweso lomuntu onolwazi. Ngokuhamba kwesikhathi, ngisho umsebenzi obonakala elukhuni kanje, njengoba esikhundleni izingxenye ukumiswa imfoloko ukulungisa indlela, kwakungase iphenduke inqubo kahle elula.